संविधानमा नागरिकको अपनत्व नहुदा सम्म कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन : अधिबक्ता खडग बहादुर खडका - रामारोशन टुडे
संविधानमा नागरिकको अपनत्व नहुदा सम्म कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन : अधिबक्ता खडग बहादुर खडका
संविधान देश को मुल कानुन हो । कुनै पनि मुलुक संविधान बिहिनताको अवस्थामा रहन सक्तैनन । सम्बिधान र कानुन को मातहत मा रहेर नै मुलुक को शासन प्रणाली सन्चालन हुने गर्दछ ।
नेपाल मा थुप्रै संविधानहरु बनेका भएता पनि सम्बिधान सभा बाट भने २०७२ सालमा मात्रै सम्बिधान बन्यो । केही समूह को असहमति भए पनि दुई तिहाई भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुको समर्थन बाट बनेको यो संविधान हाल कार्यान्व्यन को चरण मा रहेको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रम मा थुप्रै कानुन्हरु निर्माण गरिए , स्थानिय,प्रदेश र संघीय सङ्सद को निर्बाचन गरियो र यसका अतिरिक्त थुप्रै कामहरु पनि भए ।
यति हुदाहुदै पनि जनचाहना र संविधानको मुल मर्म र भावना अनुरुप अझै पनि काम हुन नसकेको भन्ने व्यापक जनगुनासाहरु आईरहेका छन । कैयौ मान्छेहरु यो संविधान लाई परिमार्जन / सङ्सोधन गरिनु पर्दछ भनिरहेका छन भने कतिपय मान्छेहरू यो सम्बिधान को खारेजी समेत गरिनु पर्दछ भनेर आफ्ना धारणाहरु राखिरहेका छन ।
संविधान सकृय र प्रभाबकारी हुने विषय होईन । संविधान लाई प्रभाबकारी बनाउने दायित्व र कर्तब्य सासक र सत्ता मा बस्ने मानिसहरु को हुन आउँछ ।
सत्ता संचालन गर्ने मानिसहरु नै गलत भैदिए भने जनता को सरकार प्रती बितृसणा फैलिन जान्छ र अन्तमा मुलुक का सम्बिधान र कानुन माथी नै पनि जनताहरु धावा बोल्न थाल्दछन ।
जुन बर्ग , क्षेत्र र समुदाय का लागि लक्षित गरि संविधान निर्माण गरिएको हो त्यो बर्ग आज यो संविधान र यस्का पक्ष देखि सन्तुष्ट छनकी छैनन ? गरिब,दुखी,सिमान्त्कृत र पछाडि पारिएको बर्ग ले यो संविधान मार्फत राहत र अपनत्व को महसुस गरेको छ कि छैन ?
संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम मानव अधिकार को रक्षा भैराखेको छ कि छैन ? दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासन कायम गराउन मा केही आशालाग्दा र भरोसा योग्य पहलकदमीहरु आबलम्बन गरिए कि गरिएनन ? बिकास निर्माण मा हुनेअनियमितता र भ्रस्टाचार लाई निवारण गर्न का लागि प्रभाबकारी कदमहरु चालिएकी चालिएनन ?
योग्यता र क्षमता का आधारमा राज्यका हरेक नागरिकले सार्बजनिक सेवा तथा राज्यका सङ्ञ्त्र्हरु मा प्रबेश पाएकी पाएनन ? अदालत, अख्तियार लगाएत का संबैधानिक निकाय लाई तटस्थ र निस्पक्ष बनाउन मा राज्यका सन्चालक को भुमिका के कस्तो रहन गयो ? भन्ने थुप्रै यक्ष प्रश्नहरू आज हाम्रा सामु खडा भैरहेका छन ।
संविधान माथी बितृसणा फैलिनु भनेको समग्र राजनितिक ब्यबस्था माथी कै चुनौती हो भन्ने कुराको सबै जिम्मेवार राजनैतिक ब्याक्तित्वहरुले बुझ्न जरुरी छ । तसर्थ सम्बिधान निर्माण भएर मात्रै पुग्दैन यो संविधान मेरो हो र मेरा लागि पनि हो भन्ने कुराको अनुभूति आम जनता ले नगर्दा सम्म संविधान प्रती जन बिस्वास छ भनेर भन्न सकिदैन ।
संविधान लाई ठुलो ठुलो अक्षर ले लेखिदैमा र रंगिन रुप दिदै मा त्यो संविधान उत्कृष्ट हो भनेर कदापि पनि मान्न सकिँदैन । जब लेखिएका प्रत्यक धारा,उपधाराहरुको अक्षरश : कार्यान्वयन गरिन्छ तब मात्रै त्यो सम्बिधान को औचित्य र प्रभाब्कारिता साबित हुन्छ ! अत : गफ र भासण भन्दा पनि सम्बिधान को सफल कार्यान्वयन को लागि आ आफ्नो स्थान बाट सबैले लागेको खण्ड मा अव्श्य नै यो सम्बिधान सार्थक रहने छ ।
संविधान दिवसको उपलक्षमा सबै मा हार्दिक सुभकामना !!